Vita fiofanana ara-miaramila ireo mpianatra komorianina | Douanes Madagascar
Ny zoma faha 08 ny volana febroary 2019, no nahavita ny fihofanana miaramila ireo mpianatra “inspecteur des douanes” komoriana miisa 10 izay tonga eto amintsika. Raha tsiahivina dia fifanarahana fiarahamiasa tamin’ny fandintseranana Malagasy no nahafan’ireto mpianatra inspecteur ireto nanatanteraka izany fiofanana ara-miaramila izany,ary mbola tohizana amin’ny fianarana mandritra ny taona iray ao Sekoly ambonin’ny fadintseranana.
Raha ity fiofanana ara-miaramila ity no resahana dia nandritra ny efatra herinandro izy ireo no niatrika izany,izay nanomboka ny faha 14 janoary ary nifarana ny faha 08 febroary 2019. Lanonam-pamaranana tsotra nefa mihaja no notanterahina ho famaranana ny fiofanana ka nifandimbiasam-pandraisam-pitenenan’ny Talen’ny fiofanana ao amin’ny Sekolin’ny zandarmaria Moramanga, ny tale miahy ny mpiasa « DRH » komoriana, ny tale jeneraly ny fadintseranana malagasy ary ny jeneraly miahy ny zandariam-pirenena malagasy,
Nasongadin’andriamatoa Talen’ny fiofanana tamin’ny fandraisam-pitenenany ireo fiofanana nomena ireto mpianatra komoriana ireto, izay nifantoka tamin’ny lafiny « physique » sy « technique ». Ny tanjona tamin’izany moa dia ny fampitomboana ny lafiny « discipline,hierarchie,sns » sy ny fanamafisana ny momba ny « cadre de l’état » sy « défense de l’économie ». Nianatra momba ny tactique sy technique de tir izy ireo,ary teo ihany koa ny momba ny police judicaire ,ary nofaranana tamin’ny contrôle routier. Nisy fitsapam-pahaizana natao tamin’izy ireo ka nanodidina ny 14,41 ny salan’isa azon’izy ireo. Marihina fa 7 ny lehilahy ary 3 kosa ny vehivavy.
Naneho fisaorana lehibe kosa ho an’ny fadintseranana sy ny zandary Malagasy ny lehiben’ny sampandraharaha miahy ny mpiasa”DRH” komoriana raha nandray fitenenana ary nanambara ny antony nisafidianany an’ny Madagascar hanatanterahana izany fihofanana izany.
Nanasongadina ny fisian’ny fiaraha-miasa eo amin’ny fadintseranana malagasy sy komoriana kosa andriamatoa tale jeneralin’ny fadintseranana malagasy raha nandray fitenenana ary naneho fisaorana ireo rehetra tonga nanatrika ny fotoana. Niarahaba ireo mpianatra komorianina izy tamin’ny risim-po sy ny fanarahana ny lalàna napetraka, ary naneho ihany koa fisaorana manokana ireo mpampiofana. Nambarany fa nahafa-po ny fanofanana ary mirary ny mbola hitohizan’izany.
Namarana ny fandraisam-pitenenana ny jenerely miahy ny zandary ka nambarany fa adidy sy andraikitry ny zandary ny mampianatra sy mampiofana ireo izay mila izany. Mirary koa ny hitohizan’ny fiaraha-miasa ary nitsodrano ireto mpianatra komorianina ny tenany mba ho tafita amin’ny tanjona ho tratrarina ary nirary azy ireo ho tamana eto amintsika mandritra ny fem-potoana hianarany.